News - JMEE teknụzụ mmepe ngo nwetara mmeri nke abụọ nke 14th National Building Material Machinery Industry Technology Innovation Award
Nso nso a, na China Building Materials Machinery Industry Association mara ọkwa nke 14 National Building Materials Machinery Industry Technology Innovation Award emeri oru, na Jidong Equipment R & D Center si "Research on Vertical Mill egweri usoro maka Production Mmụba na oriri Mbelata" oru ngo merie nke abụọ na-agbata n'ọsọ.
Rdabere na ụlọ ọrụ ntọala siri ike nke BBMG Jidong Cement na ọmarịcha teknụzụ surfacing nke Jidong Wekeley Company, ụlọ ọrụ R&D na-achikọta ụdị nke rollers na-egweri ọkụ, na-egweri rollers na akwa akwa nke ọtụtụ ụlọ ọrụ simenti, ma na-elekwasị anya na usoro mmepụta. Maka nsogbu ndị pụtara ìhè dị ka akwa akwa ịgbado ọkụ na ngwa ngwa na-ejighị n'aka mgbe ọ bụla ọ malitere, a na-eme nyocha nyocha na ngosiputa ihe ngwọta iji chọpụta ihe kachasị mma. Isi innovations nke a nnyocha oru ngo: Nke mbụ, imewe Eserese dị ka n'ezie na-arụ ọrụ ihe onwunwe oyi akwa elu, dịkwuo irè-egweri ebe nke vetikal na nkume igwe nri; nke abụọ, mee mgbanwe kwesịrị ekwesị dịka eriri uwe nke eriri na eriri na-arụ ọrụ na arụmọrụ kachasị elu iji hụ na mbupute mbido mgbe ebugharị igwe kwụ ọtọ. Na elu ya.
Site na ịbawanye ebe na-egweri ihe na-egweri ihe na -emegharị ma na-agbatị eriri ejiji nke eriri aka uwe, a ga-enwe ike ịbawanye ọrụ ndụ nke ala uwe mkpuchi, yana mpaghara na ụdị ikuku mgbanaka ahụ dị ka mgbanwe nke slag orùrù olu, ka iji belata esịtidem mgbali dị iche nke na nkume igwe nri, ma nweta mmụba na mmepụta na oriri. ihe mgbaru ọsọ nke. Rlọ ọrụ R & D jikọtara mmetụta niile nke akụkụ niile nke ọrụ ahụ, meziwanye nchọpụta surfacing na atụmatụ mgbanaka ikuku, ma mepụta nkwado ọrụ aka siri ike maka mmezi nke igwe kwụ otu ebe nke simenti na mmụba na mmepụta na oriri.